Amatye e-Aquarium: zeziphi ezilungileyo kwaye zeziphi iintlobo ezikhoyo | Ngeentlanzi
Xa uthenga i-aquarium yethu kwaye siqala ukucinga ngomhombiso, hayi izityalo kunye nezixhobo kuphela kwento ebalulekileyo. Amatye ayinto ebalaseleyo yokuhombisa kwaye aluncedo kwintlanzi. Zininzi amatye e-aquarium Bazivumelanisa nemilinganiselo eyahlukeneyo yetanki, iintlobo zeentlanzi kunye noyilo olwahlukileyo.
Kule nqaku siza kukubonisa ukuba ngawaphi awona matye mabalaseleyo e-aquariums kwaye yintoni umsebenzi wabo.
1 Amatye asetyenziselwa ii-aquariums
2 Ungawadibanisa njani amatye ee-aquariums
3 Amatye okwenziwa kwee-aquariums
4 Iingxondorha zamanzi amatsha amanzi
Amatye asetyenziselwa ii-aquariums
I-ARKA Aquatics ...
Iitanki zokuhombisa iintlanzi kunye...
Ubunene - 2.4kg yentlanzi yentlanzi, ...
Amatye asuka kumanzi acocekileyo okanye ii-aquariums zasemanzini Unomsebenzi osisiseko njengendawo yokufihla iintlanzi. Kodwa nje ukuba siqonde ukuba iintlanzi zethu zifuna indawo yokuzikhusela kwaye ziziva zikhuselekile, kuyacaca ukuba asisithandi isiphelo sesona sesona siphambili, kodwa kunokuba sibethe ngakumbi. Kungenxa yoko le nto kukho amatye okuhombisa e-aquarium. Nangona kunjalo, ukuba asifuni ukuchitha imali, sinokusebenzisa naluphi na uhlobo lwamatye, ukuba sijonga umda othile.
Kwithiyori, naliphi na ilitye linokusetyenziswa kwi-aquarium, ukuba:
Logama nje ilitye lingesilo lekalika linokusetyenziswa. Siza kukuchaza oku kamva.
Kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ilitye alizenzakalisi iintlanzi zethu xa lizikrwela emiphethweni.
Inokuba lilitye elingangcolisi i-aquarium kwaye licocekile emehlweni.
Inyani yile yokuba kufuneka sisebenzise zonke izinto esizingenisayo kwi-aquarium ngononophelo, kuba ngokuxhomekeke kubume bazo, iiparameter zamanzi zinokutshintsha, kudala ukungalingani ekunzima kakhulu ukulawula. Naliphi na ilitye olazisa kwi-aquarium kufuneka lifezekise ezi mfuno zilandelayo zintathu: ayingomthombo wecalcium, ayinayo imiphetho ebukhali enokwenzakalisa abahlali be-aquarium, kwaye ayiqulathanga izinto ezinobungozi.
Ikalika Ayilunganga njengelitye le-aquariums zamanzi amatsha kuba atshintsha ukwenziwa kwamanzi. Ngamatye e-sedimentary aqulathe ikakhulu i-calcium carbonate, ethi inyibilike ebusweni bamanzi, inyuse i-pH kwaye ibangele ukuba amanzi aqine. Ngaphandle kokuba iintlanzi zethu zifuna amanzi ane-pH ephezulu, ephezulu kune-7,5, ukusetyenziswa kolu hlobo lwamatye kwi-aquariums kuyadimazeka ngokupheleleyo. I-limestone ihlala ine-porous kwaye ikhanya ngombala, ukusuka kumhlophe kunye ngwevu ukuya kupinki.
Ukuba ukhe wabona ilitye lekalika Kulula ukwazi ukuba luhlobo luni lwelitye esiluchazayo. Okwangoku, ukuba uyathandabuza ukuba ilitye linelitye lekalika, ungafumanisa ngokugalela amanzi alukhuni phezu kwalo. Ukuba ivelisa amaqamza, ikho okanye inemikhondo yelitye lekalika. Isenokuba ngenxa yokuba imdaka okanye inentsalela yendalo. Ungalithanda eli litye kakhulu, kungoko ke kufanelekile ukuba ucoce kwaye uphinde uzame ngaphambi kokulahla ngokupheleleyo.
Ungawadibanisa njani amatye ee-aquariums
Ungasebenzisa amatye avela emasimini okanye amatye aselunxwemeni kwi-aquarium, ukuba uyazi ukuba ngekhe batshintshe umgangatho wamanzi. Kuqala kufuneka uzicoce kakuhle. Enye yeengxaki ezinamanzi kunye neentlanzi kukuba zibuthathaka kakhulu kuyo nayiphi na imichiza. Izibulala-ntsholongwane ezibonakala zingenabungozi kuthi, okanye izicoci esihlala sizisebenzisa ekhaya, zinokuba yityhefu ebulalayo kwi-aquarium. Eyona ndlela ifanelekileyo kukucoca amatye esifuna ukuwabeka kwi-aquarium kuqala.. Kungcono ukusebenzisa amanzi anesepha kunye nebrashi.
Nje ukuba sicace ukuba akukho bumdaka okanye ubumdaka obushiyekileyo, siza kuqhubeka nokubilisa ilitye kangangemizuzu engama-20 ukuqinisekisa ukuba siyisusile nayiphi na imveliso okanye into eyingozi kwi-aquarium.
Ukuba ujonge amanye amatye okuhombisa kwaye i-aquarium yakho ijongeka intle, Unokukhetha amatye okwenziwa. Emva koko siza kubona ukuba ngawaphi amatye angengawo e-aquariums.
Amatye okwenziwa kwee-aquariums
I-Resin, i-polyester okanye amatye e-ceramic zizisombululo ezinkulu zokuhombisa i-aquarium, kuba azitshintshi ukwakheka kwamanzi kwaye azibangeli ngozi kwintlanzi okanye kwizityalo, kodwa ngenxa yoko, sifumana izinto zokuhombisa.
Abanye baxelisa amatye ngokupheleleyo, abanye baqonde ngakumbi, benza iindawo zokufihla iintlanzi, ezinokuba zezendalo okanye ezingezizo, kodwa kunzima nokufumana ngokukhangela amatye naphina.
Iingxondorha zamanzi amatsha amanzi
Iindidi ezintsha zamatye zibonakala yonke imihla ezithengiswa ngamagama angaphezulu okanye ngaphantsi kwaye azisoloko zingenabungozi kwiilwandle zethu. Ukongeza kwimbonakalo ebesiyikhangela kwi-aquarium, xa ukhetha izinto eziyibumbayo (zihlala ziingxondorha kunye neengodo), kufuneka siqwalasele indlela iiparameter zamanzi ezichaphazeleka ngayo ngokuphumeza ezi zinto ziqinileyo.
Njengomgaqo ngokubanzi, iintlobo ezahlukeneyo zamatye azihlali zixubene kwi-aquarium enye, nangona ukuhlelwa komhlaba kwe-aquarium konke malunga nobuchule. Ke ngoko, sinokuxubeka ngendlela esifuna ngayo. Iingcebiso ezihlala zinikezelwa kukuba kungcono kugxilwe kuhlobo olunye lwerwala, kuba phantse kuzo zonke iimeko, ukulula lixabiso.
Kukho izinto ezithile ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa kuhonjiswa:
Gcina inani kunye nohlobo lwezixhobo zilula.
Ukuvisisana ngokubanzi kubalulekile kwifuthe lokubonwayo elimnandi. Oku kufezekiswa ngokuzama ukulinganisa izinto ezahlukeneyo ezinjengamatye, izityalo, igrabile kunye nesanti.
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukubaluleka kwezikhewu.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, umahluko kumbala kunye nemvakalo yemontage yendawo ephakathi yamanzi.
Kufuneka sahlule phakathi kweentlobo ezimbini zamatye kwiindawo ezinamanzi acocekileyo zasemanzini:
Amatye endalo: Ngamatye akhethwe ngokukodwa kwimithombo yasemanzini yamanzi kwaye acociwe kwaye aqhubekiswa.
Iziqwenga ezenziwe ngesandla ngamatye endalo: Ngamatye endalo enziwe ngezandla ngabenzi bezobugcisa ukufumana imisebenzi eyahlukileyo nenomtsalane.
Ukongeza, kula macandelo mabini, singahlulahlula ngokwendlela uhlobo lwerwala oluchaphazela ngayo ukwenziwa kwamachiza emanzini. Ngale ndlela, sinako ukwahlula:
Ezo zinto ichaphazela i-chemistry yamanzi.
I-inert epheleleyo kwaye ayizukuchaphazela iiparameter ze-aquarium.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi ngamatye e-aquarium kunye neempawu zawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Amatye e-Aquarium